Mandehana fitsangantsanganana eny amin'ny Ony Danube | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Fialan-tsasatra
Tokony hiaiky aho fa tsy dia tiako loatra ny fitsangantsanganana an-dranomasina. Farafaharatsiny ireo fitsangantsanganana ataon'ny fianakaviana izay misy ankizy kely na olona antitra be. Ny zavatra ataoko dia mbola mampientanentana ary tsy fampiononana firy. Fa diso be aho raha nieritreritra fa toy izao daholo ny sambo fitsangantsanganana rehetra. Mety tsy hahita fotoana hanaovana izany aho ANKAFIZO fitsangantsanganana an-tsambo ao amin'ny Danube.
Ny ony Danube dia ony lava be ka ireo fitsangantsanganana an-tsambo ireo dia mikasika tanàna maro amin'ny firenena samihafa ary manolotra fitsidihana fitsangantsanganana vitsivitsy izay manambatra ny natiora, ny fahafinaretana, ny tantara ary ny kolontsaina izy ireo. Rehefa dinihina tokoa, androany dia miampita firenena folo ny Danube, ao anatin'izany i Austria, Kroasia, Bulgaria, Moldova, Slovenia, Okraina, Serbia, Hongria ary Alemana, ankoatry ny hafa. Andao hojerentsika ary ny zavatra tokony ho fantatsika handehanana mitsangantsangana eny amin'ny Danube.
1 Ny renirano Danube
2 Fitsangatsanganana Danube
3 Orinasa fitsangantsanganana Danube
Ny renirano Danube
Ny renirano Danube dia efa ho telo arivo kilaometatra ny halavany, miainga avy any andrefana ka hatrany atsinanana, ary miakatra any amin'ny faritr'i Bavarian any Alemana ary midina ao amin'ny Ranomasina Mainty, eo amin'ny morontsirak'i Romania, ao anaty lava-bato mangadihady. Ao ambadiky ny Volga no renirano faharoa lava indrindra amin'ny kaontinanta ary ony iraisampirenena izy io. Araka ny nolazaiko tetsy ambony teraka tany Alemana, ao amin'ny faritry ny Black Forest, mifamory amin'ireo renirano maro hafa izay manome ny ranony ary mamela anao hivezivezy kilometatra sy kilometatra manakaiky tanàna maro mahafinaritra indrindra any Eropa.
Any Aotrisy dia mamaky an'i Linz, Vienna, Krems ary Tull. Mitohy hatrany Bratislava, iray amin'ireo tanàna telo Slovakà izay mahatratra ny diany lavitra. Any Hongria dia misy tanàna maro hafa ary tanàna roa ihany ao Kroasia. Serbia sy Bulgaria dia mandeha an-doha miaraka amin'ny tanàna efa ho folo notahin'i Danube ary i Romania kosa mbola manana vitsivitsy hafa. Renirano misy nosy 22 izy Ary mizara mora foana amin'ny fizarana telo izy: avo, salantsalany ary ambany.
Ny Danube dia renirano be fitetezana, na ny sambo an-dranomasina aza. Manana tohodrano famokarana herinaratra mahery vaika izy, eo anelanelan'i Serbia sy Romania, ary lakandrano namboarina sy voajanahary maro. Ankehitriny 87% ny renirano no azo zahana ary ny sambo dia afaka miainga avy any amin'ny Ranomasina Avaratra ka hatrany amin'ny Ranomasina Mainty. Ny fananganana ny lakandrano lehibe an'ny Danube izay nanomboka tamin'ny taonjato faha-2002 dia vita tamin'ny taona XNUMX izay nampitombo ny lanjan'ilay renirano ara-barotra sy ara-kolontsaina.
Afaka misotro ny rano ao amin'ny Danube ve ianao? Eny, ny Danube dia loharanon'ny rano fisotro ho an'ny olona an-tapitrisany maro any Alemana, na dia tsy dia be loatra any amin'ny firenen-kafa alehany aza. Betsaka ny fandotoana ary amin'ny ankapobeny tsy azo atao ny miresaka fantsona mahasalama 100% fa amin'ny ampahany ihany.
Betsaka ny sori-dalana mety hitranga ary izy rehetra dia miankina amin'ny toerana misy anao. Ny ankamaroan'ny sambo fitsangantsanganana dia manomboka na miafara amin'ny Budapest fa mety miovaova ny làlana Ary miankina amin'ny faharetan'ny dia hatrany izany. Ireo sambo fitsangantsanganana fohy kokoa dia miroso amin'ny alàlan'i Alemana sy i Aotrisy ary ny any aoriana dia misy an'i Amsterdam sy Eoropa Atsinanana.
Misy ny fitsangantsanganana an-tsambo izay maharitra herinandro ary dimy ambin'ny folo andro hafa tanàna manohina toa an'i Passau, Budapest, Vienna, Vilkovo, Amsterdam, Cologne na Bratislava. Ny fitsangantsanganana an-tsambo koa dia mijanona amin'ny tanàna kely amoron-tsiraka na vohitra kely kokoa, tsy misy mpizahatany, tanàna antonontany ary mahafatifaty. Ity no tranga misy ao Bamberg, Nuremberg, Regensburg, tanàna tranainy indrindra amin'ny Danube, Miltenberg, Würzburg, ny kinova Veniseana any Venise, Vylkove, seranan-tsambon'i Bolgaria Oriachovo sy Somovit, tohodrano Iron Gates, Dürnstein, Belgrade, Kalocsa na Budapest ., ohatra.
Araka ny hitanao, misy tanàna tsy tambo isaina, mila misafidy tsara ny fitsangantsanganana ianao. Amin'ny ankapobeny, ny fitsangantsanganana maharitra fito andro dia afaka miala amin'ny sisintanin'i Aostraliana-Alemanina, Passau, mikasika an'i Linz, Dürnstein, Tulln ary hahatratra an'i Wina. Taorian'ny fitsidihana ny tanàna, nitohy tany Budapest, Bratislava, Melk ary Passau niverina ny dia. Ny dia lavitra dia midika tanàna sy firenena maro hafa. Ireo sambo fitsangantsanganana amin'ny ankapobeny dia miompana amin'ireo fizarana roa voalohany amin'ny renirano saingy afaka mandeha mankany amin'ireo firenena atsinanana, ny faritra ambany ary mitsidika an'i Serbia, Kroasia, Bulgaria ary Romania.
Tsy manam-potoana very ianao amin'ny sambo fa tsy te-hijanona mandehandeha eny amoron'ny rano ianao? Avy eo, Safidy iray hafa dia maka fitsangantsanganana fohy be, andro na ora. Afaka mandeha fitsangantsanganana maharitra telo andro avy any Budapest mankany Viena ianao na mitsidika mivantana an'i Bratislava avy any Aostralia ao anatin'ny iray andro. Amin'ity tranga ity dia Twin City Liner ilay orinasa ary mampifandray ireo tanàna roa ireo amin'ny fitsangatsanganana 75 minitra mahafinaritra. Mandehandeha amin'ny catamaran ianao, mety tsara amin'ny haavon'ny renirano ambany, ary manomboka amin'ny Schwedenplatz ianao, amin'ny tranga ara-tantara an'i Vienna, mifanohitra tanteraka amin'izany. Ny catamarans dia manao fitsangatsanganana in-dimy isan'andro.
Orinasa fitsangantsanganana Danube
Betsaka ny mpandraharaha fitsangantsanganana an-tsambo: Vikign River Cruises, AMA Waterways, Avalon Waterways, Scenic Tours, Titan Travel, APT, A-Rosa, CriosiEurope, Emerald Waterways, Tauck, Grand Circle, Uniworld, Vantage ary Saga Cruises, ohatra. Ny hevitry ny manam-pahaizana sy mpampiasa tsara indrindra dia nalain'ny sambo AmaCello an'ny AMA Waterways, miaraka amin'ny cabins 75 sy varavarankely sy varavarana, River Cloud II, ampiasain'ny Sea Cloud, sambo misy sambo Art-Deco sy cabins 44, tsara tarehy, ary TUI Queen, somary lehibe ho an'ny hidin-trano sasany nefa miaraka amin'ny spa.
Rehefa misafidy fitsangantsanganana ianao dia eritrereto koa ny vanim-potoanan'ny taona. Raha mandeha miaraka amin'ny masoandro be ianao ary mahafinaritra ny mari-pana, dia tianao ny sambo iray misy gorodona malalaka sy lounger-masoandro, ohatra. Na dia amin'ny sambo fitsangantsanganana sasany aza dia azonao atao ny mandray bisikileta na misy fitsangantsanganana izay manolotra azy ireo hivezivezy amin'ireo toerana honenan'izy ireo.
Mandeha amin'ny renirano velona ianao ka mila manontany fanontaniana vitsivitsy ianao. Voalohany, miakatra ny ranomasina dia milatsaka ary misy fiatraikany amin'ny fivezivezena indraindray. Tsy afaka miditra ambanin'ny tetezana ianao, manana olana amin'ny famakiana vavahady sy zavatra toy izany. Fotoana iray ahafahan'ny ambany ny haavon'ny Danube dia fahavaratra, rehefa mafana ary tsy be orana. Izany no antony mety ny manontany amin'ny masoivoho. ihany koa amin'ny fahavaratra dia matetika misy lalitra, ka angamba nandoa efitrano nisy lavarangana ianao ary tokony hikatonanao foana (ny lalitra matetika no ao anaty hidin-trano lalovan'ny fitsangantsanganana, indrindra). Raha misafidy ny handeha amin'ny lohataona na fararano ianao dia mamporisika anao hitondra zavatra mafana ny alina dia mety hangatsiaka amin'ny ony.
Azonao atao ny mamakivaky ny Danube mandritra ny taona, fa Mey ka hatramin'ny septambra no vanim-potoana ambony. Mafana loatra ny volana jona, jolay ary aogositra. Mangatsiaka amin'ny ririnina, mazava ho azy, saingy mendrika ny miakatra amin'ny sambo raha voaravaka motifs noely io sambo io ary tsena noely mitsingevana. Marina izany, ity karazana ity fitsangatsanganana krismasy Misy izy ireo, eo anelanelan'ny volana novambra sy desambra fotsiny izy ireo no miasa ary misidina ireo toerana.
Tamin'ny farany: mitondra masolavitra, mankasitraka ny tontolony, raiso kiraro ahazoana aina satria isaky ny tanàna mikasika ianao dia tsy maintsy hidina sy hitsidika ianao, tadidio fa mihetsika ny sambo ary mandinika indray ny olan'ny kabine lavarangana momba ny olana momba ny bibikely. Ny varavarankely avy amin'ny gorodona no tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Mandehana fitsangantsanganana amin'ny ony Danube
10 amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra any Eropa